Ampidiro ny emulator PS1 PCSX-Reloaded amin'ny Ubuntu | Ubunlog
PCSX-Reloaded dia emulator PlayStation 1 miampita sehatra izay ahafahantsika mankafy ny ao amin'ny solo-saintsika. Tsy toy ny ematera hafa azonao jerena amin'ny Internet, PCSX manana interface tsotra sy intuitive.
Ny fanaovana an'io fomba io safidy tsara hankafizantsika ny lalao avy amin'ny fampiononana ny solosaina. Ity emulator ity manana ny endriny manokana an'ny PS1 BIOSNoho izany, ny sasany amin'ireo fiasa dia tsy hiasa ho anao. Ohatra iray ny fahaizana mampiasa karatra fahatsiarovana.
Io no hany lesoka, koa raha te hankafy ny tombony rehetra amin'ity emulator ity ianao dia tsy maintsy mahazo ny BIOS an'ny PS1 amin'ny tamba-jotra, noho ny antony ara-dalàna dia tsy afaka milaza aminao ny fomba, fa rehefa manao fikarohana kely dia ho hitanao izany. amin'ny tamba-jotra sy amin'ny fahalalanao manokana.
1 Ahoana ny fametrahana PCSX-Reloaded amin'ny Ubuntu
1.1 Misintona ary manangona PCSX-Reloaded avy amin'ny kaody loharano
2 Ahoana ny fomba handaminana ny PCSX-Reloaded
Ahoana ny fametrahana PCSX-Reloaded amin'ny Ubuntu
Raha toa ianao ka mpampiasa ny kinova farany an'ny Ubuntu na an'ny kinova taloha hatramin'ny 16.04, azonao atao ny manao ny fametrahana mivantana avy amin'ny repositories ofisialy Ubuntu. Ity dingana ity dia mihatra amin'ny fizarana Ubuntu.
Misintona ary manangona PCSX-Reloaded avy amin'ny kaody loharano
Raha noho ny antony tsy nahitanao ny fonosana PCSX tao amin'ny repositories dia hataoko azonao atao ny misintona ny emulator avy amin'ny ity rohy ity.
Mila mahazo antoka fotsiny isika manana fiankinan-doha ilaina mba tsy hanana olana mandritra ny fanatanterahana ny programa.
Mametraka ny fiankinan-doha amin'ny:
Izahay izao dia miroso amin'ny famongorana ny fisie fotsiny ary avy eo amin'ny terminal dia mametraka ny tenantsika eo amin'ny lahatahiry sisa. Mametraka ny programa amin'ny rafitray.
Ahoana ny fomba handaminana ny PCSX-Reloaded
Raha vantany vao vita ny fametrahana ny emulator amin'ny rafitra dia mitady sy manatanteraka ny emulator amin'ny menio ao amin'ny rafitray izahay. Ny zavatra voalohany dia ny fametrahana ny emulator araka ny rafitray. Vitantsika io avy amin'ny interface graphic an'ny emulator ao amin'ny menio safidy Fanamboarana -> Plugins & BIOS.
Eto isika dia afaka manao ny fanitsiana mety takianay, amin'ny fanovana ny kinovan'ny mpamily horonan-tsary, ny plugins fanamafisam-peo, ny fanitsiana ny fifaliana, ny gamepad ary / na ny keymaps.
Ao amin'ny Safidy Gamepad, manao ny manitsy ny keymaps Miankina amin'ny safidintsika, azonao atao ny mamela ny toerana misy anao ho an'ny mpanara-maso PS1 na manamboatra azy ireo indray araka izay mahamety anao.
Ao amin'ny safidin'ny BIOS, eto no ahafahanao manova ny BIOS hiasan'ny emulator, araka ny efa nolazaiko teo aloha, ny emulator dia mitondra ny BIOS azy manokana amin'ny alàlan'ny default, fa amin'ity safidy ity dia afaka manandrana ny sasany izay ao anaty Internet isika.
Vita irery ny fikirana Tsindrio ny Close ka avotra izy ireo.
Ary farany, raha hihazakazaka lalao ao amin'ny menio safidy ao amin'ny "File", dia entinay ny rakitra hanombohana mankafy ny lohateny tianay.
PCSX dia manolotra antsika ny fahafaha-mihazakazaka ny lohateny amin'ny endrika samihafa toy ny:
Avy amin'ny lalao azo ampiharina.
Avy amin'ny CD tany am-boalohany
Avy amin'ny rakitra ISO, bin, img, mdf.
Ary farany, raha mila mitahiry azy mandritra ny lalao isika dia manana safidy roa:
Ny voalohany dia ilay kilasika izay atolotry ny lalao antsika mivantana, mba hitahiry azy ao anaty slot karatra fitadidiana.
Ny faharoa dia atolotry ny emulator izay ahafahantsika mitahiry ny lalao, izay misy azy, dia toy ny hoe nangatsiaka ny lalao ary azo atao ny mamerina azy io, toy ny hoe naato fotsiny isika.
Ataontsika izany amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra ESC ary avy eo mankany amin'ny menio Emulator-> Save State. Ary hanohy ny lalao amin'ny Emulator-> Load State.
PCSX-Reloaded dia tsy isalasalana fa safidy tsara amin'ny resaka fialamboly amin'ny lalao hatramin'ny 90 ka hatramin'ny 2000.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Ampidiro ny emulator PS1 PCSX-Reloaded amin'ny Ubuntu
Omar Torn dia hoy izy:
Emmanuel Peto Gutierrez milalao harry potter 1
Valiny tamin'i Omar Rasgado
Emmanuel Peto Gutierrez dia hoy izy:
Tena ratsy fa tsy misy fanehoan-kevitra "mampiodina ahy"
Valiny tamin'i Emmanuel Peto Gutierrez
Emmanuel Peto Gutierrez no nanomboka ahy
Leonhard Suarez dia hoy izy:
Fa takiana ve ny fametrahana divay?
Valiny tamin'i Leonhard Suárez
Erick Araya dia hoy izy:
Ny GUYS, ilay fampiharana rehefa mametraka lalao dia lasa mainty ary mihidy ny fampiharana. Inona no azoko atao ??? Te-hilalao krizy dino 2 aho.
Valiny tamin'i ERick Araya
Silvio Curbelo Calosso dia hoy izy:
raha mongolianina mampihomehy aho
Valiny tamin'i Silvio Curbelo Calosso
minono ny diako mampihomehy
Ampidiro ny mpamily Nvidia amin'ny Ubuntu 17.04
Ny kinova Atom 1.18 vaovao dia mampiditra Git sy Github